China 15 motors otomatiki bhora rinotakura akasiyana angle girazi rinotenderera rinodzora muchina fekitori uye vagadziri | Zhengxing Mechan
Mazhinji makumi maviri nemakumi matatu emamota edging / mitering muchina wakagadzirirwa girazi nekristaro kugadzira
1. Chikamu chekutanga mamota matanhatu (Nha. 1-Nha. 6) girazi repazasi kumucheto uye kumberi miter kumucheto (0-60 degree), 2 mota (Nha. 7-Nha. 8) yekumashure arris seaming uye 2 motors ( Kwete 9-Kwete 10) yepamberi arris seaming. Kwete. 11. Kwete. 12 uye Nha. 13 motors ndezvekucheka kumucheto kwepasi uye yekupedzisira kupora kana Nha. 1-Nha. 6 mota dzemberi gadziriso. Mavhiri maviri ekupedzisira ndeepamberi uye kumashure arris polishing. Maitiro ese apedzwa pakufamba kumwe.
2.Muchina uyu unoshandisa KUTAKURA KUSVIRA SYSTEM. Iyo yakakodzera girazi diki (40mmx40mm) uye rinorema girazi (4mx4m) kugadzirisa. Mabhuraketi epamusoro dhizaini anogona kuita kuti vanofamba vachimhanya zvine mutsindo kushanda diki girazi 40mm saizi.
3. Mushini une girazi reukobvu rekudzivirira michina. Kana chisina kukora girazi rakaiswa mumushini. Muchina unomira zvoga. Izvi zvinodzivirira mabheyaringi kubva pakupwanya.
4. Muchina unotora PLC kutonga uye opareta interface (Bata skrini). Muchina une maviri anoshanda modhi, manyore uye zvizere otomatiki anoshanda maitiro. Mune otomatiki modhi, ma parameter e glas anogona kuiswa kuburikidza neTouch screen. Mune manyore modhi, muchina unogona kuvhiyiwa kuburikidza neswitch pane rinoshanda panhare.
5. Kuisa / kudzima kurodha conveyor shandisa nguva yebhandi. Inogona kugadzirisa kukwirira kuti igadzire akasiyana girazi kubviswa ..
6. Girazi rinotsigira furemu shandisa Aluminium extrusion bar, ine mapurasitiki.
7. Chivharo chekutakura chinoitwa nesimbi isina chinhu.
8. Iwo anotakura mabheyaringi akaiswa lubrication system, yakanyatsogadzirwa nzira yemafuta inogonesa yepamusoro uye yepasi mabheyari kuwana mafuta zvakaenzana.
9. Iko kumberi kwekufambisa kufamba kune mota. Inogona kugadziriswa kuburikidza nemagetsi bhatani pane rinoshanda pani. Ukobvu hunoratidzwa pachiratidziri. Kune zvakare kuverenga kwemuchina kuratidza girazi gobvu.
10. Iyo yekumhanyisa yekushanda inogona kugadziriswa kuburikidza neiyo frequency inverter.
11. Yekupedzisira matatu makorari vhiri anonzwa kupukuta vhiri, iyo inopa yakanaka kwazvo kupedzisa pagirazi. Tangi remvura rakaparadzaniswa.
12. Iwo mavhiri tangi yeiyo inoshanduka kona 6 mavhiri anoshandisa kutenderera system. Iyo yakashata tangi yemvura uye dziviriro yemvura sisitimu iri pasi pekutakura pakati pega rega tangi remvura zvinopa tsime dziviriro kumushini wakazara.
13. Iyo kona inogona kuratidza pachiratidziri.
14. Iyo mota inoshandisa yakakwenenzverwa mota inogadzirwa naABB, iri kunyanya kune beveling muchina.
15. Girazi rakagadziriswa pamusoro rakajeka uye rakatsetseka, richisvika kune yekutanga girazi pamusoro. Muchina uyu unoratidzwawo nehupamhi hwekugadzirisa huwandu uye nyore kushanda.
Angle shanduko renji
Vhiri vhiri remusoro
Max. hupamhi hwemharara:
Pashure: 11 motors otomatiki bhora rinotakura akasiyana angle girazi rinotenderera rinodzora muchina
Zvadaro: otomatiki cheni sisitimu inoshanduka angle girazi rinotenderera muchina unodzora
otomatiki cheni hurongwa shanduka angled girazi E ...